Mozilla Browser for Unicode Settings ( Windows ) | Online Service Center Myanmar -->
Mozilla Browser for Unicode Settings ( Windows )
Unicode တော့ပြောင်းသုံးနေပြီ၊ Zawgyi font နဲ့တင်ထားတာတွေကို Auto convert လုပ်ပေးတဲ့ MUA Web Unicode Converter ဆိုတဲ့ Addon Extension လည်းထည့်ထားတယ်။ Facebook နဲ့ Website အတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ Website တွေထဲက ခေါင်းစဉ်တွေ၊ Browser Tab bar မှာပေါ်တဲ့မြန်မာစာတွေ၊ နောက်ဆုံး Google translate မှာ ဘာသာပြန်ရင် ယူနီကုတ်ပြောင်းထားပေမယ့် အမှန်မပြတာမျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းလေး Browser ထဲက Settings မှာ ပြင်ဆင်လိုက်ပါ။
1. ပထမဆုံး Mozilla Browser ကိုဖွင့်ပါ။
2. Browser ထဲက address bar ထဲမှာ about:preferences လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
3. Language and Appearance အောက်က Fonts and Colors ရဲ့နောက်က Advanced ကိုနှိပ်ပါ။
4. ယခုပုံထဲမှာပြထားသလို Settings ချပြီး Save လုပ်ပါ။
ပြီးသွားလျှင် အပေါ်မှာပြောထားသလို မြန်မာစာမမှန်တာတွေ မှန်သွားမသွားကို ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ယူနီကုဒ်မပြောင်းရသေးပါက https://www.osc-myanmar.com/p/devicecheck.html ကိုဝင်ပြီး Check လုပ်ရင်း အောက်နားက
မှာ လမ်းညွန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ အဲ့ဒီထဲမှာ Unicode ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည့်သူအတွက် Font နဲ့ Keyboard ကို အလိုလျောက် ထည့်သွင်းပေးမည့် All in one installer ဖိုင် ပါဝင်ပါတယ်။
Aung Kyaw Soe ( 29.10.2019 - 5:26 PM )